किन बिरालो बिरालोहरू - के मानिसहरू साँच्चै हेरफेर गर्ने सत्य हो?
बिरालो व्यक्ति को नजिकै रहन को सबै भन्दा रहस्यमय र अद्भुत प्राणी हो। अन्धकारमा देख्न उनीहरूको क्षमता, चुपचाप गुमाउन र देखा पर्न सक्ने क्षमता, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताले चुरोट र जादूगरहरूसँग सम्बद्ध गर्न रहस्यमयी लक्षणहरूलाई विशेषता बढायो।
बिल्लियों मा, र वास्तव मा रहस्य को एक धेरै। उदाहरणका लागि, अहिलेसम्म यो पूर्णतया बुझ्न सकिँदैन किन बिरालोहरू पर्लिङ गर्दैछन्। एक साधारण राय खुशी संग छ। यसबाहेक, यस तरिकामा क्यामेरा-आमाले पातहरूसँग कुराकानी गर्छन्, र बलियो बिरालोले यसलाई कमजोर नगर्ने गरी कमजोर पार्छ। पुरिंगको अर्को कारण रोगको बारेमा उजुरी र दया उत्पन्न गर्ने इच्छा हो ।
ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूले पुरिंग बिल्लहरू किन पत्ता लगाउँछन् दर्जनौं प्रयोगहरू राख्छन् । तिनीहरूले निर्धारित गरेअनुसार, फ्रिक्वेन्सी अनुसार, बिरालो बच्चाको रोटीमा उपस्थित भएकासँग बिचलन बिचमा बिरालोहरू द्वारा सम्मिलित गरिएका ध्वनिहरू। यो व्यक्ति मा अवचेतन स्तर मा कार्य गर्दछ, जसमा उनलाई पालतू सबै केहि दिन को लागि इच्छा - जसलाई सॉसेज को अंतिम tidbit पनि। उत्सुकता के हो, बिल्लहरु यस प्रकार परिवार को सबै सदस्यहरुलाई प्रभावित गर्दैन, तर केवल कमजोर, जो यो आवेग राम्रो तरिकाले लिन्छन्।
सामान्यतया, बिल्लियों को शस्त्रागार को आफ्नै बिल्ली जीभ छ। तिनीहरू स्वरहरू, कन्सोन्स र यहाँ "शब्दहरू" उच्चारण गर्न सक्षम छन्। बिरालो पिरो, कसरी सबै र सडकको मान्छे, आफैलाई हेरचाह गर्न प्रयोग गरिन्छ, र लापरवाही गर्ने जनावरहरू जसले मुलायम सोफेमा दिन बिताउनका लागि प्रयोग गर्दछ, पूर्ण रूपमा एकअर्कालाई बुझ्दछन्। तर यसमा मानिसहरू सधैं सफल छैनन्। यो हुन्छ कि एक नयाँ बिरालो कुनै स्पष्ट कारणको लागि बेरोजगारी सुरु हुने छैन, र मालिकले कम हुन्छ, यो बिदा गरिरहेको छैन कि बिरालो अझै खराब छ। दुर्भाग्यवश, यो अझै सम्म स्थापित गरिएको छैन किनकि बिरालोहरू सकारात्मक र नकारात्मक अवस्थाहरूमा दुबै चल्दैछन्। तर विशेषज्ञहरूले पहिले नै थाहा पाईन कि किस प्रकार को परिंग को अंतर र मुलायम, मोटाई, चालान, कोकिंग, आभारी, स्वागत र निर्दोषता को अलग गर्न को लागी। प्रत्येक प्रजातिले विभिन्न ध्वनीहरू, यसको घटकहरू, र तिनीहरूको उच्चारणको फरक टोनको विशेषता हो। ध्यानपूर्वक सुन्नु, बिट्टे मालिकले आवाज "mrr-mrr-mrr", "hmr-hmr", "mmnng", "mr-a-o-u" र अरूलाई सुन्न सक्छ। कुन अवस्थामा सम्झना उनीहरूको मनपर्ने अनुयायी अनुकरणमा वास्तवमा, एक प्रकारको शब्दकोश रचना गर्न र पशुसँग बढी बुद्धिमानी संवाद गर्न सक्छ।
धेरैले जिन्दगी, गला, फेफड़ों या केहि अन्य अंगहरु लाई बिल्ली purrs मा रुचि राखछन। यस आवाजको उत्पादन गर्न बिरालोहरूसँग विशेष मांसपेशिहरुसँग मुखर शब्दहरू छन्, जुन हाइडोइड हड्डीमा कम्पन हुनसक्छ र सिक्न सक्छ। भाइब्रेसनबाट पुन: अनुदान र धमिलो आवाजको रूप बनाउँछ। विशेषता भनेको के हो, बिरालोहरूले यो ईश्वर र बहिष्कारमा गर्दछन्। तर के प्रकृतिले साँच्चै संचारको लागि त्यस्ता क्षमताहरूको इनाम दिन्छ?
वैज्ञानिकों किन बिरालोहरु परिंग गर्दै छन् को बारे मा एक संवेदनशील निष्कर्ष मा आयो। यो बाहिर जान्छ कि purring एक शक्तिशाली उपाय हो जसले बिल्लियों को घाँटी को निको पार्न र आफ्नो शक्ति को बहाल गर्न को अनुमति दि्छ। त्यसकारण तिनीहरूका असाधारण जीवनशैली! यसबाहेक, purring मान्छे को उपचार गर्न सक्षम छ, किनकी उनि हामीलाई अल्ट्रासाउंड थेरेपी जस्तै काम गर्दछ। यो 27-44 हर्ट्जको दायरामा रहेको छ, जसले तपाईंलाई हड्डीलाई 20% द्वारा बहाल गर्न सक्छ, तंत्रिका तंत्रको उपचार, रक्त परिसंचरण, केहि हृदय रोग, दबाबलाई स्थिर बनाउँदछ, लत र शराबको उपचार, हेमटाउटोस र घर्षणलाई बढावा दिन्छ।
निस्सन्देह, सबै बिरालोहरूसँग नै त्यहि औषधिको क्षमता छैन। यो कोट को रंग मा निर्भर गर्दछ, र पशु को ऊर्जा क्षमता र उनको "रोग" तिर बिल्ली को व्यक्तिगत रवैया मा निर्भर गर्दछ। तर सबै बिरालोहरु घर मा नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित गर्दछ। त्यसैले तिनीहरू कम्प्यूटरमा सुत्न चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई डराउँदैन, फ्रिजमा चढेर वा कामगर्ने वाशिंग मशीनमा बस्नुहोस्।
बिल्लियों मा लचीन को उपचार कसरि: आधिकारिक र लोक पशु पशु चिकित्सा को तरिका
"वन" - बिल्लियों र कुत्तहरुको लागि कलर: विशेषताहरु र समीक्षाहरु
अब (बिरालो खाना): वर्णन
लेब्राडोरको विश्वासी मित्र: नस्लको विवरण
वजन लागि फल आहार
आगोको भट्टी इँटा आफ्नो हात संग स्नान लागि निर्माण: सुविधा र प्रक्रिया विवरण
रूसी परम्परा को एक चमत्कार र महानता - काठ मा चित्रकारी
शारीरिक व्यक्तिको दिवालियापनमा वित्तीय प्रबन्धक: आवश्यकताहरू, अधिकारहरू, कर्तव्यहरू
यो hamsters खरबुजा गर्न सम्भव छ? hamsters लागि खाद्य
काँध-लंबाई बाल - कल्पना लागि ठाउँ
Adenoids: दबाइहरु र लोक उपचार को वयस्कों, लक्षणहरु र उपचार मा लक्षण
(गर्छ) क्रिया गर्छन्। को क्रिया को प्रयोग गर्न र गर्छ
मयुर मोड्युल ओरिगेमी क्षेत्रीय सम्मेलनमा
सूर्यमुखी तेल को घनत्व के हो? सूर्यमुखी तेल को घनत्व के हो?
Kulidzhanov लेव Aleksandrovich: जीवनी, Filmography, राष्ट्रियता, व्यक्तिगत जीवन, फोटो